ရုံ GAMESTOP စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက် REDDIT ဒရာမာအကြောင်းကို 24 ကြီးမြတ် MEMES - သတင်း
ကျောက်တုံးနှင့်ပတ်သက်သောဤမှတ်စု ၂၄ ခုသည် Gamestop စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းထက် ပိုမို၍ မြင့်တက်နေသည်
Reddit သုံးစွဲသူများသည် Gamestop ၏ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ရန်ပုံငွေများသည်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်တိုတောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည် Reddit အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်ကောင်းအဓိက cuck ပြောင်းရွှေ့ခေါ်ဆိုလိုသောအရာကိုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကခြံရံပုံငွေကိုခတ်ထားပြီးရှုံးနိမ့်သည်အထိရှယ်ယာဈေးနှုန်းကိုတက်ရန်အတူတကွစုရုံးခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အား ဆက်၍ စုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသည်, ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျ, အလွန်ရယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဘောဂဗေဒဘွဲ့ဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကမင်းကိုစီးပွားရေးသိပ္ပံပညာကအရမ်းရယ်စရာမကောင်းဘူးလို့ငါပြောနိုင်တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာလုံးဝမပျော်တော့ဘူး။ သင်ဟာသင်ကြားမှုတွေအများကြီးမှာအိပ်ပျော်သွားတယ်။ ဒါကဘောဂဗေဒသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောရယ်စရာအရာပဲ။
သို့သော်ဤဥပမာတွင်ထူးခြားသော stonks, Gamestop နှင့် Reddit အသုံးပြုသူများသည်အမှန်တကယ်တောက်ပသော memes အချို့ကိုဖန်တီးရန်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင့ပါပဲ ဒါဟာအီရန်ပါပဲ ဒါမှမဟုတ် bearish ။ သူတို့အားအမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တကယ်မသိခဲ့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြာသပတေးနေ့မနက်ခင်းမှာသင်တို့ဆီသို့ငါလာပြီးငါ့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို Gamestop စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် ၃၄ မှတ်ဖြင့်ပြသပြီးသင်သူတို့ကိုကြည့်ရှု့လာသည်။ ဂျက်ဒါး။
၁။ Rob Delaney သည်သူ၏လှေကိုမ ၀ ယ်နိုင်ပါ။ သင် SUNK သည် haha ​​economics x ကိုလှောင်ပြောင်သည်ဟုဆိုလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည်
GameStop ပစ္စည်းတွေကခင်ဗျားတချို့အတွက်ရယ်စရာကောင်းတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Valentine Day အတွက်ကျွန်တော့်ဇနီးကို (ကျိုးနွံစွာ) လှေတစ်စီး ၀ ယ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။ အခုတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တော့ပါ၊ ငါ့ကိုပိုက်ဆံချေးဖို့။ ဒီဟာကျွန်တော့် 2021 ဘင်ဂိုကစားကဒ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး
- ရော့ဒ်လာနီ (@robdelaney) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
ဒါကလှပင် 2. * မျက်ရည်သုတ်
- 𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆𝒅𝒆࿎࿎ (@Grimezsz) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
၃။ ငါလက်ထိုးခြောက်ကိုရချင်တယ်ဆိုရင် STONKS တက်တူးထိုးနိုင်တယ်
လက်တက်တူးထိုးစိတ်ကူး: GAME STOP
- maria cristina sherman (@mariasherm) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
၄။ သူတို့သည် CeX ရှယ်ယာများကိုမတော်တဆဝယ်ယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
နောက်ဆုံးတွင်သတင်းများရရှိပြီးနောက်လာမည့်အပတ်တွင် GameStop တွင် Facebook ကိုအသုံးပြုသူများသည်စတော့ရှယ်ယာများဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေသည် pic.twitter.com/TGTHiQy696
- ခရစ်ယာန် McDaniel (@Dabbomac) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
- Kali Uchiha 🥷 (@SailorZZtar) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
ဟားဟားဟုတ်ကဲ့ငါ stonk စျေးကွက်ကိုချစ်၏ pic.twitter.com/ojwFVqSFgT
- ငါးမန်းကောင်လေး (@bigsharkguy) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
7. ဂိမ်း၏ Wolf ၏စတော့အိတ်လမ်း
£ 20 ဘလက်ဘယ်ရီစတော့ရှယ်ယာကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ငါနှင့်ဇနီးသည်နံနက်စာကိုစားကြသည် pic.twitter.com/WNRRb1vaJX
- Adam Burns (@AdamBurnsPR) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
ငါကြားသမျှအားလုံး - ဂျက်ခ်ျအိုင်ပီ4ရရှိသည်ဆိုပါက
- (@Joshieyamaguchi) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
9. BOURGEOISIE ကျော်
~ poors ~ သည်ရုတ်တရက်အားလုံး ၁% နှင့်တူညီသောဂိမ်းကိုမည်သို့ကစားရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုပါစို့၊ ၎င်းသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်နေသည့်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောစနစ်ဖြစ်သည်။
- ပထမအိမ်ထောင်ဖက် prance (@bocxtop) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
သငျသညျပဟေဠိအဘယ်အရာကို Simpsons ဇာတ်ကောင်များမှာ
10. * ဆေးပြင်းလိပ်အပေါ် puffs * နိမ့်ရောင်းမြင့်မြင့်ဝယ်!
- Sean Kross (@seankross) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
ဒီကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူ lol pic.twitter.com/j1nW81zEkl
- Bridget Phetasy (@BridgetPhetasy) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
12. ya လုပ်ခဲ့တယ်အကြောင်းစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး!
GameStop တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလော။ ဂိမ်းရပ်တန့်ပြီးဘုရားသခင်ကသင့်ကိုသူ့ရှေ့မှာခေါ်ဆိုတဲ့အခါသင်ဘာလုပ်မလဲ။
- စာရာဟာဂျီ (@KindaHagi) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
ငါ့ကို GameStop စတော့ရှယ်ယာသတင်းများကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေသည် pic.twitter.com/n90sW68Qpl
- jake faris (@fake_jaris) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
14. သင် emg Margot ကိုပြောပြပါ
'The Big Short' (၂၀၂၁) pic.twitter.com/Fc7b9cuCgT
- အလင်း၊ ကင်မရာ၊ Pod (@LightsCameraPod) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
15. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခရီး x
- Lucy Watson (@Lucywwatson) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
ငါငါးနှစ်လိုပဲတစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကို Gamestop ကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလား
အလက်ဇန္ဒြားဒက်စတန် (@xan_desanctis) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
ငါ့ကိုf* ck န်းကျင်နှင့်ဤ Gamestop ခွအေနအေကိုရှင်းပြဖို့တစ် ဦး စိတ်ဆိုးအဖြူ BF ရ
- ဘုရင်မ Kitten DiStefano (၅'၅ နှင့်တရားဝင် ၂၅) (@ElaniKitten) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
18. The Big Short Short အားယနေ့ညပြန်လည်စောင့်ကြည့်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။ ဒါကငါလုပ်ပေးသွားမယ့်ငါပေါ့ဟာသမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုမျှော်လင့်ဖို့အများကြီးမရှိကြပါဘူး
ငါ BIG တိုတိုကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်ရပြီးဒီ GameStop ဇာတ်လမ်းကိုနားမလည်သေးပါ
- Aisha Harris က (@craftingmystyle) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
19. beta ကို alpha ဖြစ်လာသည်
ငါ gamestop အရာနှင့်ပတ်သက်။ ဘာမှမလေ့လာသင်ယူရန်ငြင်းဆန်ပေမယ့်ငါကလုပ်ကိုပြု၏ pic.twitter.com/5gUyR5wJMo
- 𝙧𝙞𝙣𝙙𝙣𝙚𝙧𝙧𝙞𝙣𝙙𝙣𝙚𝙧 (@grantrindner) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
20. Ugh, GameStop စတော့ရှိသည်
ငါတကယ်တော့ GameStop အခွအေနေအဘို့အနံပါတ်များကိုကြည့်ပေမယ့် WOW ခဲ့ပါဘူး pic.twitter.com/LrUN9p4kof
အဆီ Charlie ကနေဆိတ်သငယ်နှင့်ချောကလက်စက်ရုံ
- sab •• TH သူတို့သည်သူတို့ (@sasponella) ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
Gamestop ဟာဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေရန်စဉ်းစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပင်ပန်းစေသည်။ ငါလမ်းပေါ်မှာငါလမ်းလျှောက်နေရင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုဘာဖြစ်လို့အော်ဟစ်နေတာလဲ။
- Will James (@OtherWillJames) ဇန်နဝါရီလ 28, 2021
အခု Wall Street pic.twitter.com/LmmrQdc7jI
- ပေါလ်လောဆင် (PaulLaw10 @) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
- Jim Malo OAM (@thejimmalo) ဇန်နဝါရီလ 26, 2021
၂၄။ ငါနည်းနည်းလုပ်ပြီးပြီ၊ La Gamestopéတွင်နေထိုင်ပါ
တော်လှန်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန် BlackBerry စတော့ရှယ်ယာတွင် ၅ ဒေါ်လာ ၀ ယ်ခြင်း pic.twitter.com/I8AeyYvmym
- 𝐭𝐫𝐞𝐲𝐭𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 (@treytylor) ဇန်နဝါရီလ 27, 2021
• ဘာကြောင့်ဒီနေ့လူတိုင်း GameStop စတော့ရှယ်ယာအကြောင်းပြောနေကြတာလဲ၊
• Rita Ora ၏မွေးနေ့ပါတီရှိ CCTV ကင်မရာများကိုရဲကပြောကြားခဲ့သည်
• '၁၂ နာရီကြာဆိုင်းဆိုင်းကိုအခမဲ့လုပ်ခြင်းဟာလူမဆန်ဘူး။ ' - သူနာပြုများသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်လခခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်